Diyaarad dhaawacyo ka soo qaaday Dhuusamareeb oo soo gaartay magaalada Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Diyaarad dhaawacyo ka soo qaaday Dhuusamareeb oo soo gaartay magaalada Muqdisho
Diyaarad dhaawacyo ka soo qaaday Dhuusamareeb oo soo gaartay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Dhaawacyada tiro ka mid ah Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku soo dhaawacmay dagaalkii maanta dib uga qarxay Magaalada Dhuusamareeb ayaa laga soo dejiyay Magaalada Muqdisho.
Diyaarad ka tagtay Magaalada Muqdisho ayaa dhaawacyada ka soo daabushay Garoonka Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb, iyadoona keentay Magaalada Muqdisho.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in diyaaradda ay horey u sii qaaday meydka Cabdi Yare (Magaradow), Taliyihii Ciidanka Ilaalada Madaxweyne Qoorqoor, oo saaka lagu dilay toogasho ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb.
Wararka ayaa sheegaya in Sarkaalkan oo ka tirsanaa Hay’adda Nabad Suggida uu u geeriyooday rasaas u muuqatay in meel fog laga soo tuuray, xilli uu ku sugnaa Xarunta Madaxweyne Qoorqoor uu ka degan yahay magaalada.
Geerida Sarkaalkan ayaa soo dedejisay dagaalka barqanimadii maanta dib uga qarxay Magaalada Dhuusamareeb, una dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Ahlu Sunada Galmudug.
Inta la’ogyahay shan qof ayaa ku dhimatay dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday, ee maanta ka qarxay Dhuusamareeb, kuwaa oo afar ka mida ay yihiin dhinacyadii dagaalamay.
In ka badan shan iyo toban kale oo u badan Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna ayaa la fahamsan yahay in ay ku dhaawacmeen dagaalka.
Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Ahlu Sunna ayaa weli abaabul xoogan ka wada Magaalada Dhuusamareeb, mana muuqato ifafaalo xiisadda lagu qaboojinayo.
Dhaawacyo laga keenay Dhuusaamareeb oo laga soo dejiyay Muqdisho